vBulletin မှာ မြန်မာစာပေါ်စေချင်လို့ပါ။ နောက်ပြ — MYSTERY ZILLION
vBulletin မှာ မြန်မာစာပေါ်စေချင်လို့ပါ။ နောက်ပြ
ကျွန်တော်အခု vBulletin မှာ ဖိုရမ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်ုမာစာ ဇော်ဂျီ eot ကို မသွင်းရသေးပါဘူးခင်ဗျာ.. အဲ့ဒါကြောင့် ဖိုရမ်၀င်တဲ့သူတွေအတွက် ဇော်ဂျီအခက်ရှိနိုင်သလားမသိဘူးခင်ဗျာ..
နောက်ပြီး phpbb3 ကနေ vBulletin နောက်ဆုံးဗားရှင်းထံကို အားလုံးလွဲပြောင်းချင်ရင် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ.. သူတို့ပြောတဲ့..Impex.v1.92.Revision.2164.PHP.NULL-vBLider လေးကိုတော့ ဒေါင်းပြီး ထည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ... ထည့်လည်းထည့်ပြီးပါပြီ.. ဒါပေမယ့် ဆက်မလုပ်တတ်တော့လို့.. အဲ့ဒီမှာ ရပ်နေရပါတယ်...
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရင် ပြန်စာကိုမျှော်နေပါ့မယ်ခင်ဗျာ
eot နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် သိသလောက် နည်းနည်းပြောပြမယ်နော်။ eot ဆိုတာ Embedded OpenType ပါ။မိုက်ခရိုဆော့ကနေ စထွက်တာပါ။ user computer ထဲမှာ web designer အသုံးပြုထားတဲ့ ဖောင့်မရှိလည်း မြင်နေရအောင် အဲဒီဖောင့် စတိုင်အတိုင်း ဖတ်လို့ ရအောင် ပြုလုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ .eot က IE မှာပဲ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Firefox နဲ့ တခြား Browser တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့က .eot ကို သုံးတယ်ဆိုတာ ဇော်ဂျီဖောင့်အတွက်လေ.... အရင်က ဇော်ဂျီဖောင့်ကို .eot သုံးတယ်ဆိုတာက လူတိုင်းရဲ့ စက်မှာ ဖောင်ဂျီဖောင့်မရှိလို့ပါ။ ခုက အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့ မြန်မာတွေ အားလုံးနီးပါးရဲ့ စက်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် တင်ထားတဲ့အတွက် .eot ကို သုံးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ခင်ဗျာ....
Impex ကတော့ ကျွန်တော်လည်း မလိုလို့ မသုံးဖူးဘူး။ read me ဖိုင်တော့ ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒါလေး ဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါလား။ ဒီလောက်ကြီး ခက်မယ် မထင်ပါဘူး။ စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး database ကို ဒေါင်းလော့ချပြီး လိုကယ်မှာ အရင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါမှ လုပ်ထားခဲ့တာလေးတွေ မလစ်မှာ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် yeman ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း Read me File ကော Vb ရဲ့ Menual တွေမှာပါ လိုက်ဖတ်ပေမယ့်.. အတော်လေးကို ရွာလည်နေတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း.. vb ကိုပြောင်းချင်နေတော့.. အဖြေလည်း ရှာလို့မရဖြစ်နေတယ်.. ဟူး.. လည်နေတယ်ဗျို့.......:((:((
eot အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒီဆိုဒ်ထဲမှာလည်း eot မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်.. ။
ဒါပေမယ့်.. Impex သိတဲ့သူများရှိရင်လည်း ေ၀မျှလမ်းညွန်ပါဦး...
ပြီးတော့. VB နဲ့ ပက်သက်ပြီးလည်း.. အသုံး၀င်ပုံ.. mod လေးတွေကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းထည်းထားပြီး..လေ့လာချင်သူများရှိရင် လေ့လာလို့ရအောင်.. စီစဉ်ပေးဖို့.. ဒီကနေ အကြံပြု တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်...
MZ မှာတော့ Vbulletin ကို သုံးထားပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့က ဝယ်သုံးထားပါတယ်... တော်တော်အဆင်ပြေတယ်.. Impex ကို ကျွန်တော်တို့ မသုံးဘူးဖူးဗျ... သူတို့ပြောတာက အားလုံးကို Import လုပ်ပေးတယ်တဲ့... ကျွန်တော် မစမ်းဘူးဖူးဗျ... Mod တွေကတော့ အများကြီး ဘာလုပ်ချင်တာလဲ... ကျွန်တော် ကူရှာပေးပါ့မယ်.. ကျွန်တော် mod တော်တော်များများ သိပါတယ်..
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ.. အခု ကျွန်တော် Impex ကို မသုံးတော့ပဲ အပင်ပန်းခံပြီး.. မန်ဘာတွေရဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုချင်းယူပြီး.. တောင်းပန်စာနဲ့.. ပြန်လည်အသစ်၀င်ဖို့ ဖိတ်ကြားစာကို ထည့်ပို့ပေးရတော့မှာပါ.. မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ..။
ဒါပေမယ့်.. mod တွေကိုတော့ အကို့ကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာပဲ.. ကျွန်တော့်က VB 3.8.3 ကိုသုံးပါတယ်.. တခါတည်း ဗားရှင်းပြောထားတော့.. mod လေးတွေလိုရင် တောင်းလို့ရအောင်ပေါ့.. အဟီးး...
အခု ကျွန်တော်တစ်ခုသိချင်တာက.. မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်အတိုင်း.. သူတို့ရဲ့ ဖိုရမ်အစမှာ MKPortal ကိုသုံးထားပါတယ်..( ဒါကို မူလစာမျက်နှာလို့...ဖိုရမ်ထဲမှာရေးထားပါတယ် ) ကျွန်တော်လည်းသုံးထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. ဖိုရမ်ထဲမှာက အဲ့ဒီ MKPortal ကိုပြန်သွားဖို့ လင့်ကို မထည့်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဒီဖိုရမ်ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင် User CP တို့၊ Member Listတို့ စတဲ့နေရာမှာ MKPortal ကိုပြန်သွားဖို့ လင့်ထည့်ချင်လို့ပါ။ နာမည်လည်း မူလစာမျက်နှာလို့ ပေးချင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီ လင့်ထည့်ပုံထည့်နည်းလေး သိချင်လို့.. ကူညီပါဦးနော်...
နောက်ထပ်မေးချင်တာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလို့ပါ.. အခု ကျွန်တော် အကို့ရဲ့ဆိုဒ်အတိုင်း vBadvanced ကိုသုံးချင်လာတယ်.. :D ကျွန်တော်သွင်းပြီးပြီ.. အလုပ်မလုပ်နေဘူး.. နဂိုရှိပြီးသား MKPortal ကိုတော့ နာမည်ပြောင်းထားလိုက်ပြီး.. တင်နေတာ..မရနေဘူး.. ACP မှာတော့ ပေါ်နေတယ်.. ဆိုဒ်ရဲ့ မူလစာမျက်နှာမှာ မပေါ်နေသေးဘူး..:2:
သူ့ရဲ့ cmps_index.php ကိုလည်း forum root ထဲထည့်ပြီးပြီ.. ဒါလည်း မရနေဘူး... :O:O:O
ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရအုံးမလဲ ဆိုတာ ညွန်းပေးပါဦးအကို..
အခုက ဘာကို သုံးချင်တာလဲဟင်...
ဟိုဟာမေးလိုက် ဒီဟာမေးလိုက်ဆိုတော့ ဘာဖြေပေးရမှန်းကို သိတော့၀ူးးးး :d
အဟီး.. ဟုတ်တယ်နော်.. မေးတာများသွားလို့...
ကယ်.. အခုမေးမှာကတော့ဗျာ... အခုကျွန်တော် VB နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေပါတယ်.. အဓိကကတော့ .. ဒီဖိုရမ်မှာ မူလစာမျက်နှာမှာသုံးတဲ့ vBadvanced ကိုသုံးချင်လို့ပါ။ အဟောင်းတွေမရှိတော့ပါဘူး.. အခုမှ စလုံးရေ စ ပြန်လုပ်ထားပါတယ်.. ပြီးတော့.. ဘယ် mod တွေလိုအပ်သလဲဆိုတာကိုလည်း လမ်းညွန်ပါဦးနော်...
ခက်တာက phpbb3 ကနေ vb ကို ကူးဖို့အတွက် phpbb3 ကရှိတဲ့ ပိုစ့်တွေကို အကုန် vb ထဲပြန်ထည့်ချင်တဲ့ ကိစ္စကတော့ အမေးချင်ဆုံးပဲ.. သိတဲ့လူလည်း ဖြေပေးကြပါဦးနော်...:77::77:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပေါ့...
အခုက.. Category မှာ မြန်မာစာရေးတာ အပြည့်မပေါ်နေဘူး... ဥပမာ.. အကြောင်းအရာများနှင့်ပက်သက်၍ လို့ ရေးလိုက်ရင်.. အကြောင်းအရာမျာ%#@^*( ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်...
ဒီဖိုရမ်မှာဆိုရင်.. вЂњ နည်းပညာရပ်ဝန်း вЂќ ဆိုပြီးရေးတဲ့နေရာမှာ ရေးတာ အပေါ်ကအတိုင်းပေါ်နေလို့ ကူညီပါဦးနော်...
ဒီဖိုရမ်မှာဆိုရင်.. “ နည်းပညာရပ်ဝန်း ” ဆိုပြီးရေးတဲ့နေရာမှာ ရေးတာ အပေါ်ကအတိုင်းပေါ်နေလို့ ကူညီပါဦးနော်...
UTF-8 ပြောင်းသုံးလိုက်တယ် ထင်တယ်....
သူပေးထားတဲ့ default အတိုင်း ပြောင်းသုံးလိုက်ပါ။ (ကိုစေတန် ကျွန်တော့ကို ပြောပြထားတာပါ...)
ဗျာ.. ကျွန်တော်ပြောင်းမသုံးဘူးအကို.. သူပေးတဲ့အတိုင်းဘားမှ ကိုမပြောင်းရသေးတာ.. အဲ့ဒါက ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင် မရှာရသေးဘူးအကို...:d:d
အဲဒီပြဿနာက ဒီဖိုရမ်မှာလည်းရှိပါတယ်။ စာလုံးတွေ အရှည်ကြီးရေးရင် ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖြေရှင်းနည်းကို မသိပါဘူး။ unicode ပြဿနာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ လက်ရှိဖြေရှင်းနည်းကတော့ စာလုံးရှည်ရှည်ရေးရင် အင်္ဂလိပ်လိုသာ ရေးလိုက်အကိုရေ.... :P
ကျွန်တော် UTF-8 မပြောင်းဘူးအကို.. ဒီဖိုရမ်ထဲမှာတော့ ရေးလို့ရသလိုပဲနော်.. နည်းနည်းလေးရှည်လိုက်တာနဲ့ ရကိုမရတော့တာ...။:D:D
နောက်တစ်ခု တစ်ခါထည်းမေးချင်ပါတယ်.. pdf ဖိုင်ကို တင်လို့ရပါသလား.. တင်လို့ရရင် ကုဒ်လေးပါပေးဦးပါ။ :D:77::77:
အကိုက ဘယ်လို တင်ချင်တာလည်း မသိဘူး....
တင်ချင်တဲ့ ပုံစံလေး အရင်ပြောကြည့်ပါလား
Vbulletin က UTF-8 မှာ မြန်မာစာနဲ့ အဆင်မပြေဘူး... ဘာလို့လည်းတော့ သေချာမသိဘူး... ဒါကြောင့် Category name တွေကို english လိုပေးလိုက်တာ.. မြန်မာလို ပေးရင် အပြည့်မပေါ်ပဲ &#34 လိုမျိုးကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Category Name ကို size limit ပေးထားလို့ပါ။ ပြင်ချင်ရင်တော့ database ထဲမှာ သွားပြင်ရတယ်။ အလုပ်ရှုပ်လို့ တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲရေးပါတယ်.. pdf က ဘယ်လိုပေါ်ချင်တာလဲ.. နောက်ပြီး pdf က download ပဲကောင်းပါတယ်.. နောက်မို့ဆို firefox မှာဆို loading မပြီးမချင်း ဘာမှ ပြောင်းလို့မရဘူး.. ဟမ်း နေတတ်လို့ပါ..
ဒီဖိုရမ်ထဲမှာတော့ ရေးလို့ရသလိုပဲနော်.. နည်းနည်းလေးရှည်လိုက်တာနဲ့ ရကိုမရတော့တာ...။:d:d
နောက်တစ်ခု တစ်ခါထည်းမေးချင်ပါတယ်.. pdf ဖိုင်ကို တင်လို့ရပါသလား.. တင်လို့ရရင် ကုဒ်လေးပါပေးဦးပါ။ :d:d:77::77:
စာလုံးရှည်သွားရင် ဖြစ်တာက ဒီဖိုရမ်မှာလည်း ဖြစ်တတ်တယ်လေ.. အောက်ကလင့်မှာ တချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါ။
pdf က elibrary သဘောမျိုးလုပ်ချင်လို့လား။ ဒီတိုင်းတမင်တင်ချင်တာလား။ elibrary သဘောမျိုးလုပ်ချင်ရင်တော့
မှာ သွားလုပ်လို့ ရပါတယ်။
Vbulletin က UTF-8 မှာ မြန်မာစာနဲ့ အဆင်မပြေဘူး... ဘာလို့လည်းတော့ သေချာမသိဘူး... ဒါကြောင့် Category name တွေကို english လိုပေးလိုက်တာ.. မြန်မာလို ပေးရင် အပြည့်မပေါ်ပဲ " လိုမျိုးကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Category Name ကို size limit ပေးထားလို့ပါ။ ပြင်ချင်ရင်တော့ database ထဲမှာ သွားပြင်ရတယ်။ အလုပ်ရှုပ်လို့ တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲရေးပါတယ်.. pdf က ဘယ်လိုပေါ်ချင်တာလဲ.. နောက်ပြီး pdf က download ပဲကောင်းပါတယ်.. နောက်မို့ဆို firefox မှာဆို loading မပြီးမချင်း ဘာမှ ပြောင်းလို့မရဘူး.. ဟမ်း နေတတ်လို့ပါ..
ဟုတ်လား.. ကျေးဇူးဗျာ.. ဒါဆို ဒီထဲမှာရှိတဲ့ BBcode တွေကို ေ၀မျှပေးနိုင်မလားအကို.. :77:
youtube, flash,Gvideo,Highlight,webtext တွေကိုပေါ့..ဘယ်လိုပြန်ထည့်ရတယ်ဆိုတာလည်း လမ်းညွန်ပါဦးနော်.. အခုမှ အစဆိုတော့..အားလုံးကို အကူအညီတောင်းပါရစေဗျာ..
ကျေးဇူးပါဗျာ.. ကိုစေတန်ပြောတဲ့အတိုင်း မြန်မာကွန်နယ်ရှင်နဲ့ဆို မန်ဘာတွေ စိတ်ညစ်သွားလိမ့်မယ်.. လင့်ပဲပေးတာ ကောင်းပါတယ်နော်...:D:D:D
banner bar ရဲ့ အောက်တစ်ဘား Menu ဘား မှာလေ.. မူလစာမျက်နှာဆိုပြီး.. VBadvanced ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ mkportal ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရောက်သွားအောင်လေ.. အဲ့ဒါပြင်လို့ရပါသလား...:77::77:
အကိုက အကုန်နီးပါးမေးသလို ဖြစ်နေပြီ။
admin cp ထဲမှာ အကုန်ရှိတယ် အကိုရေ...
Vb ဖိုရမ်မှာ ၀င်ဖတ်ပေး...တနေ့နည်းနည်း နည်းနည်းသာ ကလိပေး၊ နားလည်သွားလိမ့်မယ်။ vb က ပိုက်ဆံပေးရသလို သုံးလို့ လည်း အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပါ....
ဟုတ်တယ်နော်.. ကျေးဇူးပါဗျာ. ကျွန်တော်လည်း အခုမှ စသုံးမှာဆိုတော့.. သိပ်မသိသေးလို့ပါ.. အခုလို အများကြီးရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ.. ကျွန်တော် လည်း နည်းနည်းချင်းဖတ်ပါဦးမယ်...
ပုံအတိုင်း လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ပြောပြနိုင်ရင်ပြောပြပေးပါ။
၁။ အတိုင်း စာလေးနည်းနည်းရေးလို့၇အောင်ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ မွေးကင်းစ လေးပါ ရေးချင်တယ်။
၂။ အတို်င်း rank လိုဂိုတွေထည့်ပြီးပေမယ့်.. admin ကော။ user တွေမှာပါ မပေါ်နေဘူး.. ဘယ်နားမှာ ပြင်ရအုံးမလဲ လို့သိချင်လို့ပါ။။။
အဲဒါက mod တွေ သုံးထားတာ.... default ပါတာ မဟုတ်ဘူး....
banner bar ရဲ့ အောက်တစ်ဘား Menu ဘား မှာလေ.. မူလစာမျက်နှာဆိုပြီး.. VBadvanced ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ mkportal ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရောက်သွားအောင်လေ.. အဲ့ဒါပြင်လို့ရပါသလား...
Search in Templates ထဲကနေ user cp ဆိုပြီး ရှာလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ navbar ကနေ စိတ်ကြိုက်၀င်ပြင်ပါ။
ကျေးဇူးပါဗျာ.. ကိုစေတန်ပြောတဲ့အတိုင်း မြန်မာကွန်နယ်ရှင်နဲ့ဆို မန်ဘာတွေ စိတ်ညစ်သွားလိမ့်မယ်.. လင့်ပဲပေးတာ ကောင်းပါတယ်နော်
လင့်ပေးလည်း ဒီကွန်နက်ရှင်ပဲလေ... ဒီတိုင်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပေးတဲ့နည်းက pdf ကို ဒဲဖွင့်တာ မဟုတ်ဘူးလေ... flash အဖြစ်ပြောင်းပြီး ပြတာပါ။ browser မဟန်းသလို စက်လည်း လေးမသွားပါဘူး။ သူ့ loading နဲ့ သူပေါ့။ Elibrary လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေမှာပါ။ မသုံးတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ limit အကန့်အသတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့လို သုံးရတဲ့လူတွေ အတွက် သက်သာတာပေါ့..